Tokyo 2020: Ciyaaraha Olombikada '100%' ayaa socda - madaxweynaha ciyaaraha Seiko Hashimoto
Madaxweynaha Tokyo 2020 Seiko Hashimoto wuxuu "100%" hubaa in Olombikada ay sii socon doonto, laakiin wuxuu ka digay Ciyaaraha "waa in loo diyaar garoobaa" in la sii wado iyada oo aan la daawanin daawadayaasha haddii ay dhacdo ...
Shiinaha ayaa ku degay Mars
Waxaa xaqiijiyey warbaahinta dowladda Shiinaha Waxaa qoray Joey Roulette oo la cusbooneysiiyay May 14, 2021, 8:50 pm EDT Sawir Mars ah oo ay qabteen Shiinaha Tianwen-1 baaris bishii Febraayo. Shiinaha ayaa ku dhajiyay rootihiisa ugu horreeyay dusha sare ee Mars maalintii Jimcaha, warbaahinta ay dowladdu xiriirka la leedahay ...
JD Logistics, jawaabta Shiinaha ee hamiga saadka ee Amazon, si kor loogu qaado $ 3.4B ee IPO
Cred Dhibcaha Sawirka: JD Logistics ita Rita Liao @ ritacyliao / 3:27 PM GMT + 8 • Meey 17, 2021 Ka dib markii ay ku shaqeyneysay guduudka 14 sano, faraca saadka ee JD.com ayaa isu diyaarinaysa in la bixiyo bilowga dadweynaha ee Hong Kong. JD Logistics ayaa qiimeyn doonta saamigeeda betwe ...
Dowladda Shiinaha waxay si rasmi ah u ansixisay RCEP, bogga Wal-Mart ee Mareykanka wuxuu si rasmi ah ugu furan yahay dhammaan shirkadaha Shiinaha.
Wasiirka Ganacsiga: Dowladda Shiinaha waxay si rasmi ah u ansixisay RCEP 8-dii Maarso, Wang Wentao, Wasiirka Ganacsiga, wuxuu ka jawaabayay su'aasha weriyaha ee ku saabsan dhaqan-galinta iyo hirgelinta Iskaashiga Iskaashiga Dhameystiran ee Gobolka A ...
Ururinta 20 qurxinta kirismaska ​​ee ugu quruxda badan khadka tooska ah, tixraac wanaagsan xilliga.
Sida aan ognahay in Kirismaska, dhalashadii Ciise, ay tahay maalin dhaqameed reer Galbeed ah, oo ah 25-ka Diseembar sanad walba. Mass waa nooc ka mid ah dacwada kaniisadda. Kirismasku waa iid diimeed, maxaa yeelay waxaa loo dabaaldegaa sida dhalashada o ...
Aaway waxyaabihii lagu qurxiyay Kirismaska?
Xilli kasta oo Ciidda Masiixiga ah, waxaan iibsan jirnay qurxinta Kirismaska ​​iyo hadiyado badan oo aan ku qurxinno guriga oo hadiyado u siinno saaxiibbadeen, waa adeegsi weyn. Oo markaad hesho hadiyado kirismas ah oo qurux badan, oo aad qurxiso qurxinta kirismaska, waxaa laga yaabaa inaad aad u xiiseyso ...
Waa maxay sheyga ugu caansan xilligan Kirismaska? Xilli kasta oo Kirismas ah, waxaad weydiin kartaa waa maxay waxyaabaha ku soo kordha qurxinta guryaha? Fududeeyaha waxaa laga yaabaa inuu yahay geedka kirismaska, kirismaska ​​nalka, Santa Sack, kaararka kirismaska ​​ama wax kale. Laakiin xilli ciyaareedkan, sheyga ugu isbeddelka, waxaan ...
Shirkaduhu waxay ikhtiraacaan si ay ula qabsadaan nooc cusub
Waxaa qoray YUAN SHENGGAO Intii lagu gudajiray Carwadii 127-aad, ku dhowaad 26,000 oo shirkado Shiineys ah ayaa soo bandhigay wax soo saar fara badan oo khadka tooska ah ah, iyagoo siinaya smorgasbord gaar ah oo loogu talagay iibsadayaasha adduunka oo dhan, abaabulayaashu waxay yiraahdeen. "Si looga caawiyo si wanaagsan in munaasabadda loogu qabto khadka tooska ah, waxaan galnay dadaal badan," ayuu yiri Qin Lei, m ...